Mari inodhura yakawanda yedhijimusi muna 2022. Rondedzero yemari inodhura yakawanda yezuva redu nhasi. Ndeipi mari inoshandiswa sedhijitari?
Nhamba yepamusoro 10 mari inodhura yakawanda yemadhora nemutengo weiyo imwe yemari yemari muUS dollars (USD) panguva ino.
Mari inodhura yakawanda yedhigiri mukati 19/01/2022
eCash (XEC) 0.000095 $
WINkLink (WINKLINK) 0.00041 $
BitTorrent (BITTORRENT) 0.0027 $
Dent (DENT) 0.0038 $
VeThor Token (VTHO) 0.0052 $
Holo (HOT) 0.0059 $
Revain (REV) 0.0078 $
Iyo yakachipa yakaderera digital mari ndeye pamhepo sevhisi ye Cryptoratesxe.com webhusaiti inoratidza iyo yepamusoro mari yemadhora nemutengo wakaderera wemari imwe inotengeswa pamari yekutengesa ye crypto.
Iyo "yakachipa digital mari" webhusaiti online inoshandisa yakavhurika masosi kubva kune digital mari kuchinjanisa uye inogadzira chiyero cheiyo isingadhuri zvakanyanya crypto munguva chaiyo.
Yakachipa kana inodhura digital mari inoonekwa pamutengo wemari imwe chete. Izvo zvinodikanwa kusiyanisa kukosha kwemari kubva mukuvandudzwa kweiyo digital mari, i.e. kukosha kwakazara kwese kwemisikau yakapihwa nemari iyi.
Kusiyana ne "Cheapest digital digital money" sevhisi, iyo inoratidza mutengo wemari imwechete, mutengo wakazara kana kubviswa kwemari yese inoratidzwa nerimwe basa resaiti, mari yemadhora misika yemari .
Zvichida yakachipa digital mari pamutengo wemakobiri inogona kuve yakakura kwazvo maererano nezve capitalization.
Rondedzero yeiyo isingadhuri zvakanyanya mari yemadhora iri kuramba ichichinja, nekuti crypto kutengeserana kuri kuenderera mberi uye iyo digital mari exchange rate iri kuwedzera kana kuderera.
Shandisa iyo "yakachipa mari" sisitimu yepamhepo uye yemahara.
Iyo yepamusoro yemari yakachipa yemakristani nhasi 19/01/2022 inomiririrwa nekusarudzwa kwegumi cryptos muchirongwa chekugadzirisa kubva kune yakachipa kusvika kune yakanyanya kudhura, muhurongwa hwekuwedzera mutengo.
Iyo yakachipa kana yakakwira mutengo we crypto inoratidzwa mumadhora kuitira nyore kuzvienzanisa.
Muyero weiyo yakachipa mari mari yemadhora inoratidzwa pa $date, asi chiyero chinogara chichitariswa.
Ehezve, mangwana iwo wepamusoro-soro wemutengo wakachipa wemakristani emangwana achaunzwa.
Cheapest digital digital money 2022
Iyo isingadhuri zvakanyanya digital mari ye 2022 ndeye yedu yemahara yepamhepo sevhisi sevhisi inoratidza isingadhuri mari yemadhora ye 2022.
Muenzaniso weiyo isingadhuri crypto inopinda mu 2022, asi isu tinoongorora mwedzi mitatu yekupedzisira yeiyo yekutsinhana. Mutengo uye masimba ehuwandu anoshanduka zuva rega rega uye saka chiyero chedu chepamusoro "mari yemadhora misika yemari 2022" inogona kuchinja zuva rega rega.
Mari yemadhora ine mutengo wakaderera.
Yakaderera mutengo mari yemadhora - yedu digital mari mari yemari kukosheswa. Coin chimwe chezvinhu zvakajairika pakuverenga. Zviripachena kuti zvinokwanisika kuverengera ese kugoverwa kwemari uye chero huwandu hwemari kudzamara kukosha kwayo kwaiswa.
Naizvozvo, iyo chiyero chemakristcokiti nemutengo wakaderera iri pane mamiriro.
Tafura yeiyo yakachipa yemakristani.
Tafura yeiyo yakachipa yemakristani - inooneka ratidziro yedu yepamusoro yemari isingadhuri.
Mune iyo tafura yeiyo yakachipa iyo crypto unogona kuona zita reiyo digital mari uye yayo yekutsinhanisa madhora eUS.
Paunodzvanya pane imwe isingadhuri yemakristuru patafura, iwe uchaenda kune yakadzama ruzivo peji peji yeiyo chiyero cheiyi crypto.
Chati yeiyo yakachipa yemakristani.
Iyo yakachipa yemhando yepamusoro digital mari chati imwe yemahara pamhepo chishandiso inoratidza chikamu chepamusoro chemari isingadhuri ye mari yemadhora.
Iyo yakachipa yepamusoro digital mari chati inoratidzira yepamusoro 10 crypto mitengo yemari yepasi pasi.